ရေကြီးရေလျှံမြေပြိုမှုကြောင့် အိန္ဒိယတွင် သေဆုံးသူ ၁၅၀ ခန့်ရှိပြီ - VPS - Shweman Online Media
ရေကြီးရေလျှံမြေပြိုမှုကြောင့် အိန္ဒိယတွင် သေဆုံးသူ ၁၅၀ ခန့်ရှိပြီ
admin | August 13, 2019 | News | No Comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကီရာလာပြည်နယ် ဗိုင်ယာနဒ်ခရိုင်မှာ သြဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့က မိုး သဲသဲမဲမဲ ရွာပြီး မြေပြိုခဲ့တာကြောင့် လူအယောက် ၅၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူ တယောက်က ပြောပါတယ်။ အခုချိန်ထိ အလောင်း ၁၁ လောင်းကို ရှာတွေ့ထားတယ်လို့ ဒေသန္တရ မီးသတ် အရာရှိ တယောက်က ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်တာနဲ့ မြေပြိုတာတွေကြောင့် စုစုပေါင်း လူ ၁၅၀ လောက် သေဆုံးသွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကီရာလာပြည်နယ်မှာ ဒေသခံ ၁ သိန်း ၆ သောင်းခွဲလောက်ဟာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ ခိုလှုံနေကြရတယ်လို့ ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေက ဩဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့က ပြောပါတယ်။
ကီရာလာ ပြည်နယ်ဒေသတချို့မှာ မိုးသက်လေပြင်းကျနိုင်တဲ့ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက်တွေကြောင့် လက်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း နှောင့်နှေးမှာကို အာဏာပိုင်တွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းတလျှောက် ရေကြီးတဲ့ နေရာတွေမှာ အိန္ဒိယလေတပ်၊ ရေတပ်နဲ့ အမျိုးသားသဘာဝဘေး တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (NDRF) တို့က ပူးပေါင်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေကြတာပါ။
ကီရာလာပြည်နယ်၊ ကတ်နာတာခ်ပြည်နယ်နဲ့ မဟာရာရ်ှထရာ ပြည်နယ်တို့မှာ အခုနှစ်အတွင်း ရေကြီးမှုဒဏ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားနေရပြီး ဂူဂျာရတ်၊ အာဆန်နဲ့ ဘီဟာ စတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာလည်း အခုနှစ် မုတ်သုံရာသီအတွင်း ရေကြီးတာကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များခဲ့ပါတယ်။
မဟာရာရ်ှထရာပြည်နယ်မှာ ရေကြီးတာကြောင့် လူသေဆုံးသူ အယောက် ၃၀ လောက်ရှိပြီး လာမယ့် နှစ်ပတ်အတွင်း ရေမြုပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ရထားပြန်ပြေးဆွဲဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကီရာလာပြည်နယ်မှာ မိုးများပြီး ရေကြီးရေလျှံတာကြောင့် လူအယောက် ၂၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လူပေါင်း ၅ သန်းကျော် ရေဘေးသင့်ခဲ့တဲ့ အဲဒီသဘာဝဘေးဟာ နှစ် ၁၀၀ အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ရေကြီးရေလျှံမှုအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Credit DVB Burmese News
အိန်ဒိယနိုငျငံတောငျပိုငျး ကီရာလာပွညျနယျ ဗိုငျယာနဒျခရိုငျမှာ သွဂုတျ ၁၁ ရကျနကေ့ မိုး သဲသဲမဲမဲ ရှာပွီး မွပွေိုခဲ့တာကွောငျ့ လူအယောကျ ၅၀ ထကျမနညျး သဆေုံးခဲ့တယျလို့ တာဝနျရှိသူ တယောကျက ပွောပါတယျ။ အခုခြိနျထိ အလောငျး ၁၁ လောငျးကို ရှာတှထေ့ားတယျလို့ ဒသေန်တရ မီးသတျ အရာရှိ တယောကျက ပွောပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ရကွေီးရလြှေံဖွဈတာနဲ့ မွပွေိုတာတှကွေောငျ့ စုစုပေါငျး လူ ၁၅၀ လောကျ သဆေုံးသှားပွီလို့ သိရပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ကီရာလာပွညျနယျမှာ ဒသေခံ ၁ သိနျး ၆ သောငျးခှဲလောကျဟာ ကယျဆယျရေးစခနျးတှမှော ခိုလှုံနကွေရတယျလို့ ပွညျနယျအာဏာပိုငျတှကေ ဩဂုတျ ၁၁ ရကျနကေ့ ပွောပါတယျ။ ကီရာလာ ပွညျနယျဒသေတခြို့မှာ မိုးသကျလပွေငျးကနြိုငျတဲ့ ရာသီဥတု ခနျ့မှနျးခကျြတှကွေောငျ့ လကျရှိ ကယျဆယျရေးလုပျငနျး နှောငျ့နှေးမှာကို အာဏာပိုငျတှကေ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ အိန်ဒိယအနောကျပိုငျးနဲ့ တောငျပိုငျးတလြှောကျ ရကွေီးတဲ့ နရောတှမှော အိန်ဒိယလတေပျ၊ ရတေပျနဲ့ အမြိုးသားသဘာဝဘေး တုံ့ပွနျဆောငျရှကျရေးအဖှဲ့ (NDRF) တို့က ပူးပေါငျး ကယျဆယျရေး လုပျနကွေတာပါ။
ကီရာလာပွညျနယျ၊ ကတျနာတာချပွညျနယျနဲ့ မဟာရာရျှထရာ ပွညျနယျတို့မှာ အခုနှဈအတှငျး ရကွေီးမှုဒဏျ ဆိုးဆိုးရှားရှား ခံစားနရေပွီး ဂူဂြာရတျ၊ အာဆနျနဲ့ ဘီဟာ စတဲ့ ပွညျနယျတှမှောလညျး အခုနှဈ မုတျသုံရာသီအတှငျး ရကွေီးတာကွောငျ့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှု မြားခဲ့ပါတယျ။ မဟာရာရျှထရာပွညျနယျမှာ ရကွေီးတာကွောငျ့ လူသဆေုံးသူ အယောကျ ၃၀ လောကျရှိပွီး လာမယျ့ နှဈပတျအတှငျး ရမွေုပျနတေဲ့ နရောတှမှော ရထားပွနျပွေးဆှဲဖို့ အခကျအခဲရှိတယျလို့ အာဏာပိုငျတှကေ ပွောပါတယျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈက ကီရာလာပွညျနယျမှာ မိုးမြားပွီး ရကွေီးရလြှေံတာကွောငျ့ လူအယောကျ ၂၀၀ ကြျော သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
လူပေါငျး ၅ သနျးကြျော ရဘေေးသငျ့ခဲ့တဲ့ အဲဒီသဘာဝဘေးဟာ နှဈ ၁၀၀ အတှငျး အဆိုးရှားဆုံး ရကွေီးရလြှေံမှုအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
ကျောက်မဲမြို့တွင် ကောလဟာလ အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြို့အခြေအနေ ….
ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျေးရွာများမှ စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများကို ကယ်ထုတ် ….
ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေအတွက် ပလက်ဖောင်းတီးဝိုင်းနဲ့ အလျူခံခဲ့တဲ့ ဇော်ကြိီး
စစ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့ဆေးတပ်ဖွဲ့ စံချိန်ကောင်းများ ရရှိခဲ့ …